8 mishonga inokonzeresa nhema miedzo yezvinodhaka (uye zvimwe zvinhu zvishanu) - Zvinodhaka Info | Chikunguru 2021
Zvinodhaka Info Wellness Info Info, Hutano Dzidzo Kambani, Iyo Checkout Hutano Dzidzo, Hutano Kambani, Hutano Dzidzo Nharaunda, Kambani Nharaunda Hutano Dzidzo, Nhau Kambani Kambani, Nhau Nharaunda, Wellness Zvinodhaka Vs. Shamwari Checkout Zvipfuwo
Kuru >> Zvinodhaka Info >> Mishonga inogona kukonzera nhema miedzo yemishonga
Mishonga inogona kukonzera nhema miedzo yemishonga
Pane zviitiko zvinoverengeka apo paungakumbirwe kupedzisa bvunzo dzemushonga-paunenge uchitsvaga basa nyowani, kana iwe uri mudzidzi kana mutambi. Urine zvinodhaka zviyero ndizvo zvakajairika bvunzo (kunyangwe mamwe mvura yemuviri inogona kuongororwa). Iyo bvunzo pachayo iri nyore uye isingarwadzi, uye inongoda chete weti sampuro. Inogona kunzwa isinganetseki kukumbirwa kutora bvunzo yemushonga, uye zvakakosha kuti uzive kuti kune mimwe mishonga nezvimwe zvinhu zvinogona kukonzeresa bvunzo dzezvakanaka dzenhema.
Chii chinonzi kunyepa kwakanaka kwechirwere bvunzo?
Mhedzisiro inhema inowanzoitika kana nzira yekuongorora yekuona zvinodhaka ichiona mamwe mamorekuru ari mumuviri semishonga isiri pamutemo kana usina kumedza chero chinhu chisiri pamutemo. Zvinodhaka zvinowanzoongororwa zvinosanganisira amphetamines / methamphetamines, benzodiazepines, barbiturates, mbanje, cocaine, PCP, methadone, uye opioid (narcotic).
unogona here kunwa doro paunenge uri pakuberekwa
Tsvagiridzo yakaitwa kuBoston Medical Center inoratidza kuti bvunzo dzemishonga dzinoburitsa positi dzenhema mu5% kusvika 10% yematambudziko. Kunyangwe ichi chisiri chikamu chakakwira, mhedzisiro yekutadza bvunzo dzemishonga inogona kukanganisa basa rako, dzidzo, kana tarisiro yebasa. Zvinyorwa zvinoverengeka zvakajairika, mishonga yekunze-kwe-iyo, mahebhu, mavitamini, uye kunyange zvimwe zvekudya zvinogona kukonzeresa bvunzo dzenhema dzakanaka.
Kana zvasvika pamitemo,yambiro inowanikwa, asi kazhinji chete kana iwe ukaitsvaga, saysBrent McFadden, Pharm.D., Muridzi we Brent's Pharmacy & Chirwere cheshuga muSt. George, Utah.Inowanzo iri mune yakatsetseka yakanaka uye vanhu vazhinji, mune yangu ruzivo, usaverenge izvo zvavanopihwa namuzvinachiremba wemishonga.
8 mishonga inokonzeresa manyepo akanaka ekuedzwa zvinodhaka
Nekudaro, kana iwe wakaita sevanhu vazhinji vasingatore nguva yekudzidza zvakadhindwa zvakadhindwa, heino runyorwa rwezvinyorwa uye nemishonga inopfuura pakaunda iyo inogona kukonzeresa manyepo akanaka echirwere bvunzo.
1. Analgesics / NSAIDS
Iyo mishonga Daypro (oxaprozin), iyo inonyorerwa mhando dzeArthritis, inogona kukonzera muyedzo wakanaka wenhema we benzodiazepines. Iyo yekurapa mishonga tramadol zvinogona kukonzera a mhedzisiro yakanaka yePCP . Kazhinji pamusoro pe-the-counter anti-anogumbura marwadzo mishonga senge Zvakaipa (ibuprofen)uyeAleve (naproxen)zvinogona kukuita kuti uedze zvakanaka kune barbiturates, THC (cannabinoids), kana PCP.
2. Mishonga inorwisa mabhakitiriya
Quinolone mishonga inorwisa mabhakitiriya, yakadai Levaquin ( kudenga ) kana Saipurasi ( ciprofloxacin ) inowanzo gadzirirwa zvimwe hutachiona (weti turakiti, sinus, nezvimwewo). Ivo vakaratidzirwa kune inokonzeresa manyepo akanaka mhedzisiro mhedzisiro yeopiates. Rifampin, mishonga inorwisa mabhakitiriya inoshandiswa kurapa tibhii, inogona zvakare kutungamira kune yenhema yakanaka mhedzisiro yemaopiates .
3. Mishonga yekudzvinyirira
Zvinodzvinyirira - zvakaita se Wellbutrin ( bupropion ), Prozac ( fluoxetine ), Seroquel ( quetiapine ), Effexor ( venlafaxine ), trazodone , uye amitriptyline -Inogona kukonzera nhema mhedzisiro mhedzisiro yeamphetamine kana LSD.
Antihistamines uye zvimwe zvekubatsira kurara zvinediphenhydramine (senge Benadryl ) zvinogona kukonzera nhema mhedzisiro yePCP kana methadone. Doxylamine (iyo inoshanda chinhu muUnisom) inogona zvakare kukonzera yakanaka mhedzisiro mhedzisiro yemethadone, opiates, uye PCP.
RELATED: Benadryl ruzivo | Doxylamine ruzivo
5. Central nervous system (CNS) zvinokurudzira
Ritalin ( methylphenidate ) uye Adderall anoshandiswa kurapa ADHD, uye anozivikanwa kukonzeresa nhema nhema yeamphetamines uye methamphetamines.
RELATED: Ritalin ruzivo | Adderall ruzivo
chekudya kana usiri kunzwa mushe
6. kukosora zvinodzvinyirira
Dextromethorphan, chinhu chinoshanda muRobitussin, Delsym, uye zvimwe zvinopfuura-zvinopesana chikosoro zvinodzvinyirira, zvinogona kukonzera kuti skrini yemishonga ive yakanaka kune maopiates uye / kana PCP.
RELATED: Dzidza njodzi dzekupindwa muropa nechikosoro
Chinhu chakakosha mukati Kushamiswa (pseudoephedrine) zvakare ndicho chinhu chikuru pakugadziramethamphetamine.
RELATED: Yakadzvanywa ruzivo
Prilosec ( omeprazole ), Nexium ( esomeprazole ), uye Prevacid ( lansoprazole ) anoshandiswa kurapagastroesophageal Reflux chirwere( GERD ) kanapeptic ulcer chirwere(PUD)uye inogona kukonzera nhema nhema yeTC.
Kurudziro yangu kune chero munhu anotora mishonga iyi angave akaongororwa mishonga ndiko kutanga uye kunyanya kutaura chokwadi kune muyedzo, anodaro Dr. McFadden. Ziva kana iwo mamedhi auri kutora anogona kukonzera kunyepa kwakanaka uye kuzivisa maneja webvunzo. Kana zvakatemwa, ita shuwa kuti une chitambi kubva kukhemisi, izvo zvicharatidza kuti mushonga wakapihwa kwauri. Kana chiri chigadzirwa cheOTC, iva nerudzi rwezvinyorwa (mudziyo wacho wanga urimo, katsamba kubva kuna chiremba wako, nezvimwewo) zvaunenge watora.
5 zvakajairika zvinhu zvinogona kukonzera manyepo positives
Pamusoro pemishonga yekunyorerwa, izvi zvimwe zvinhu zvakajairika zvinogona kutungamira kune yekunyepera yakanaka drug test.
1. Vitamin B zvinowedzera
Riboflavin, inozivikanwawo seB2, inowanikwa mu hemp mbeu yemafuta uye inogona kudzosa anhema THC (mbanje)kuverenga.
shuga yako yeropa inofanira kunge iri nhamba ipi
CBD ndiyo isiri-psychoactive chikamu chemuti wembanje uyo wave mushonga unorumbidzwa kune zvese kubva pakurwadziwa kwekurwadziwa, kusimudzira kurara, kubatsira kubvisa kushushikana. Weti mishonga yekuyedza screen yekuvapo kweTHC, iyo psychoactive chinhu chembanje, asi dambudziko rinogona kumuka nekuda kwekuti zvigadzirwa izvi hazvina kunyatsodzorwa uye kusvibiswa kwemuchinjikwa kunogona kuitika.NeCBDD inowanika mune zvese kubva pahupfu hwekunwa, kuonda uremu mafomati, kune tinctures yemhando dzese, manyepo chaiwo weti miedzo yeTC ichawedzera uye yakajairika, anonyevera Dr. McFadden.
3. Mbeu dzepoppy
Kudya mbeu dzepoppy usati waedzwa zvemushonga (senge mune muffin kana pabhagi) zvinogona kukonzeresa mhedzisiro yezvinodhaka mhedzisiro yeapioid. Mbeu dzePoppy dzinouya kubva pambeu yembeu yeopiyamu poppy uye nepo mbeu dzichicheneswa isati yadyiwa, dzinogona kunge dzichine huwandu hwehuwandu hweopiyamu masara. Muna 1998, hurumende yemubatanidzwa yakasimudza chikumbaridzo kumaopiyati kubva pa0.3 micrograms kusvika pa2 micrograms pamamirilita, asi zvimwe zvivakwa zvekuyedza zvichiri kuenda neyakare muyero.
4. Kushambidza muromo
Doro riri muruoko sanitizer (kubva pakushandisa zvakanyanya), mimwe mishonga yemvura, uye kuwacha mukanwa kana zvimwe zvinogadzirwa nemweya zvinokukonzeresa kuti uedze zvakanaka kunwa doro.
5. Mvura yematani
Tonic mvura inequinine, uye kana ikadyiwa yakawanda inogona kutungamira ku mhedzisiro yakanaka mhedzisiro yeopiates.
Zvaunofanira kuita kana iwe uine inhema yakanaka mushonga bvunzo
Kana iwe uchitenda kuti wakundikana bvunzo yemushonga nekuda kwekutora mushonga wekunwa kana kunwa chimwe chezvinhu izvi une zvaunogona kuita.Ndingavayambira kuti vatsvage maneja kuti aite bvunzo chaidzo kusati kwatorwa danho, anodaro Dr. McFadden, uyo anokurudzira kuti masampuli atumirwe kumarabhoritari kuti aite imwe assasscopy yekuyedza yakawanda. Zvakare, kana vachigona kuratidza kuti vari kutora mushonga unogona kuburitsa chokwadi chisiri chechokwadi (nekugadzira chipimo chemutemo), maneja anogona kuronga imwe bvunzo mazuva makumi matatu kusvika makumi matanhatu gare gare. Kana, pasi pekutenderwa navanachiremba vavo, munhu wacho anogona kunge asiri pamushonga kwenguva yakareba iyoyo, bvunzo dzisina kunaka dzinofanira kubuda.
Lexapro vs. Xanax: Misiyano, kufanana, uye izvo zviri nani kwauri
Zuva raamai rino, kurudzira amai kuronga kuongorora
glipizide, isiri-insulin-mhando mishonga, rimwe zita re:
mangani 800mg ibuprofen yandinogona kutora
unobvisa sei kupatirwa
chiitiko chepamusoro chedhd chinoitika mukati
kuwanda kwekurema uye kufutisa muhurumende dzakabatana
ine robitussin dm ine codeine mairi